पूर्वउपराष्ट्रपति झा भारतीय नागरिक भएको खुलासा ! - Nalapani
पूर्वउपराष्ट्रपति झा भारतीय नागरिक भएको खुलासा !
काठमाडौँ । पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा भारतीय नागरिक भएको रहस्य खुलेको छ ।
मुलुकको संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सेनापति र प्रहरी महानिरीक्षक लगायत हुनलाई ‘वंशज’ नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अंगीकृत नेपाली नागरिकले उल्लेखित पद नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा ती पदसहित मुख्यमन्त्री हुन वंशज नेपाली नागरिक हुनपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर भारतीय नागरिक झा संवैधानिक प्रावधान विपरित कसरी उपराष्ट्रपति बने रु त्यो रहस्यमय भएको छ ।
लामो समय मुलुकको न्यायालयमा रहनुभएका झा मुलुकको पहिलो उपराष्टपति हुनुभयो । झा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएपछि मधेसी जनअधिकार फोरमबाट राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको हो । संविधानसभामा उहाँ माओवादी पार्टीकी शान्ता श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्मा र एमालेकी लक्ष्मी शाक्यलाई पराजित गरेर २०६५ सालमा उपराष्ट्रपति बन्नुभएको हो ।
उपराष्ट्रपतिमा विजयी भएपछि झाले हिन्दीमा शपथ लिनुभएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले नेपाली भाषामा शपथ गराउँदा उपाष्ट्रपति झाले त्यसलाई तत्कालै मौखिक रुपमा हिन्दीमा उच्चारण गरेर शपथ लिनुभयो । हिन्दीमा शपथ लिएपछि उहाँमाथि संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लाग्यो ।
झाको शपथविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन समेत भए । संविधानसभा बैठकमा समेत विरोध भयो । उपराष्ट्रपतिलाई नेपालीमा शपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर पर्यो । रिट परेपछि उपराष्ट्रपति पद निस्क्रिय हुन पुग्यो । विवाद सुल्झन २ वर्ष लाग्यो ।
झा उपराष्ट्रपति भएको २ वर्षपछि मैथिलीमा सपथ लिनुभयो । त्यसपछि बल्ल उहाँको विवाद टुंगियो र उपराष्ट्रपति पदमा आसीन हुनुभयो ।
उपराष्ट्रपति बनेलगत्तै हिन्दीको लागि लामोसमय विवाद झेल्नुभएका झा अन्ततः भारतीय नागरिक नै रहेको रहस्य खुलेको छ । भारतको चर्चित अनलाइन मैबिहारी डटकम mबष्दष्जबचष्।अयm ले झा बिहारी नागरिक भएको उल्लेख गरेको छ । झाको जन्म बिहारको दरभंगास्थित गरौलमा भएको र पठनपाठन त्यहीँबाट शुरु भएको अनलाइनले लेखेको छ ।
मैबिहारी डटकमका अनुसार झाले मधुवनीबाट मेट्रिक परीक्षा पास गर्नुभएको छ । त्यसपछि आरके कलेज पढ्नुभयो । बिहारबाट ग्रेजुएशन गरेपछि उहाँ कानून पढ्नका लागि नेपाल आउनुभएको हो ।
नेपालमा केही वर्ष पढेपछि थप अध्ययनको लागि उहाँ बेल्जियम जानुभयो । बेल्जियमबाट फर्केर वकालत पेशामा सक्रिय हुन थाल्नुभयो र न्यायाधीश हुनुभयो । न्यायालयमा रहँदा देखिनै उहाँ भित्रभित्रै नेपालमा हिन्दी स्थापित गराउन सक्रिय रहेको समेत खुलेको छ ।
‘परमानन्दका दाजु शंकर झा मिथिलांचलका बलिया पहलवान थिए जसले ठूलाठूला पहलवानलाई हराएर चर्चा कमाएका थिए’ मैबिहारी डटकमले उल्लेख गरेको छ , ‘त्यसबेला उहाँको पहलवानीको चर्चा नेपालसम्म हुने गर्दथ्यो । तत्कालीन राजाले शंकर झाबाट प्रभावित भएर उहाँलाई आफ्नो दरबारमा बोलाउनुभयो । त्यसपछि उहाँलाई सेनामा उच्च जिम्मेवारी दिइयो । तत्कालिन शासकले उहाँलाई सप्तरीमा केही जमिन समेत उपलब्ध गराए।’ झा परिवार त्यसबेला देखि नेपालमा बस्न थालेको हो । उहाँका भाइ अहिले पनि दरभंगामै हुनुहुन्छ।
← क्रिश्चियनको प्रचारमा लागेको भन्दै कांग्रेसले संसदमै नंग्यायो महरालाई एप्पलको सबैभन्दा महंगो आइफोन ‘एक्स’ भारतमा पनि बन्ने →